Kenya oo Itoobiya ka darnaatay iyo dhibaato cusub oo dalka Somalia ku soo wajahan (Xaqiiqo dhici doonta) - iftineducation.com
iftineducation.com – Siyaasiin iyo aqoonyahano fara badan oo Soomaaliyeed ayaa mudo dhoor bilood ah waxa ay la yaabanaayeen sababta dowlada Kenya ay arimaha Somalia uga dambeeyn la´dahay dowlada Soomaaliyeed oo caalamka oo idil laga aqoonsan yahay.
Qilaaf hooseedka Kenya iyo dowlada Soomaaliya ayaa waxa uu ka soo biloowday dagaaladii ka dhacay jubooyinka gaar ahaan xurguftii magaalada Kismaayo balse isfaham waagaan ayaa iminka waxa uu sababay inay Kenya soo abaabusho siyaasiin caan ka ah dalka Somalia kuwaas oo dhanka Siyaasada dhoor jeer looga adkaaday waliba in mudo ah fadhi ku dirir ku ahaa gudaha dalka Kenya.
Kenya oo koobiyeenaysa tobaneeyo sano ka hor sidii ay ahaan jirtay dowlada Itoobiya ayaa dhanka kale waxaa taas u sii dheer Kenya oo iloowday in kooxda Al Shabaab ay mar kale soo xoogeeysan karto maadaama mucaaradka cusub ee Kenya ay qarka u saaran yihiin inay ku biiraan ama is garabsadaan Shabaabka Jubooyinka (Barre Hiiraale & Maleeshiyaadkiisa) .
Dowlada Kenya oo siyaasada dalka Somalia si aan caadi aheeyn ugu jahwareertay waxaa maalmo ka hor dalkeeda lagu aas aasay urur la magac baxay Guddiga Badbaadinta Qaranka Somalia kaas oo u muuqda mid lagu cabsi galinayo dowlada Somalia oo iminka ay hogaamiyaan rag wax soo bartay kana madax banaan hogaamiye-kooxeedyo iwm.
Qabiirada siyaasada Somalia indha indheeya ayaa waxa ay qabaan in Itoobiyaanka qatar ku yihiin isku dirka Soomaalida oo idil qeebaheeda kala duwan balse qaabka ay Kenya wax iskugu direeyso ayaa lagu sheegay mid halis ku ah amniga dalkeeda maadaama hubka ay Keenyaatiga qeeybinayaan uu dib ugu laaban doono gudaha dalka Kenya.